umshini wokusika amanani amakhoba aphansi uthengiswa e-India,pakistan,kenya,kolkata
umthengisi wentengo ephansi uyathengiswa uwumshini osetshenziselwa ukusika amakhoba amancane aluhlaza, ukhipha ummbila ukolweni, utshani welayisi nezinye izitshalo ezidayiswayo,utshani nogwayi, utshani bukakolweni, utshani bommbila, umhlanga umhlanga corm, isiqu samazambane amnandi, i-beanstalk, utshani kakolweni okusanhlamvu nezinto ezihlukahlukene ze-biomass.
Lezi zinto ezichotshoziwe zisetshenziselwa ukondla izilwane.Kulungele ukuzalanisa izinkomo nezimvu, inyamazane,ihhashi njll. Ibuye isetshenziselwe ukufafaza amabele,ukolweni,ukolweni,njll.
Ngokuthuthukiswa kwamadolobhana namadolobhana ezweni lethu, imboni yethu yokwalusa imfuyo nayo ithole ukuthuthukiswa okusheshayo, emva kokuvuna, ezinye izitshalo zotshani ngokusebenzisa Umsiki weChaff oqoshiwe abese usika, bese kuba yizinkomo kanye nokudla kwezimvu, ukondla izilwane ezifana nezinkomo nezimvu ezizosetshenziswa, ukuphatha okufika ngesikhathi imishini eminingi yotshani, vikela utshani bokungcola kokubola komlilo obolile kwimvelo, kanye nendawo enkulu yendawo, engeza okuqukethwe kwendaba yenhlabathi, thuthukisa ukwakheka kwenhlabathi, ukuzala kwenhlabathi, ukuthuthukisa izilimo ngaphandle kwendlela entsha, ukunciphisa ukungcoliswa kwemvelo.
Umsiki weChaff ngokuyinhloko yakhiwa okuphakelayo idivayisi, idivaysi yokudlulisa, insiza yokondla, Umsiki, ithuluzi lokuchotshozwa, umshini wokuhlunga, into yokuphonsa, umshini wokuhamba, isivikelo, idivaysi yokudonsa nokunye. I-Straw Cutter ingeyo-Msiki omusha osikiwe ngezinhloso eziningi, usika owomile Usika, qing isitoreji hay Umsiki, Umhlanga usika Umsiki neminye imishini yokusika yokusika nemishini yokuxhuma, ocwaningweni olwenzelwe abalimi uChaff Cutter, kubalimi ukuxazulula inkinga yokulahlwa kukadoti.